DMX ဦး ဆောင်သော 3D Tube Factory - China DMX ဦး ဆောင်သော 3D Tube ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ဖုန်းနံပါတ်: 0086 75529372936
DMX ဦး ဆောင်သောမျက်နှာကျက်အလင်းရောင်
DMX သည် 3D ပြွန်များကို ဦး ဆောင်သည်
DMX သည် pixel light ကို ဦး ဆောင်သည်
Bar Disco Ceilling သည် 3D Tube Video ကို ဦး ဆောင်သည်
ညကလပ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့်ပြိုလဲကြယ်အလင်းအိမ် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
dmx 3D ဗီဒီယိုပြွန်
360 pixels ဒေါင်လိုက်ပြွန်တုတ်, LED မုန်တိုင်းကြယ်ပွင့်အလင်း
dmx rgb ဒစ္စကိုအလင်း, စတုရန်း pixel အလင်း cube အိမ်ရာ
ရေစိုခံ ဦး ဆောင်သော pixel panel ကိုနံရံ
led point ရင်းမြစ်၊ မျက်နှာကျက်နှင့်နံရံကပ်တပ်ဆင်ထား ...
အပူဆုံးကလပ် / ဘားအလှဆင်နံရံ panel က led panel nig ...
2018 dmx 16pixels ဒီဂျစ်တယ်ပြွန်၊ rgb dmx pixel li ...
decora တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် LED အလူမီနီယံအလင်းရောင်အစင်း ...
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမူရင်းနေရာ: Guangdong, China ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: REIDZ မော်ဒယ်နံပါတ်: RZ-LXD-004-SMD5050-0.5 နာမည်အပြည့်အစုံ: disco ceilling led 3d tube video LED ရင်းမြစ်: SMD50503IN 1 အရောင်: ရောင်စုံအပြည့်အလုပ်လုပ်တဲ့ဗို့အား: AC85 ~ 265V အမြင့်ဆုံးစွမ်းအား - 12w / 24w / 32w ထောင့်ကြည့်ရှုနိုင်မှု - 360 ဒီဂရီ Brightness: 660ml ထိန်းချုပ်မှု mode: DMX, Madrix, PC, ဂီတပစ္စည်း: ပလတ်စတစ်ကာလီကာဗွန်နိတ်အရွယ်အစား: 50cm အရှည် / 100cm အရှည် / 200cm အရှည် ...
နိုက်ကလပ်အလှဆင်မှုအတွက်ဥက္ကာပျံမီးအလင်းရောင်ကို ဦး ဆောင်သည်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအမျိုးအစား - LED Matrix အလင်းသွင်းမှုဗို့အား (V): DC12V မီးခွက်ပါဝါ (W): ၂၄ မီးလုံးအလင်းရောင်စီးဆင်းမှု (lm): 1200 CRI (Ra>): ၇၀ အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် (℃): -20 - 50 အလုပ်လုပ်သောတစ်သက်တာ ( နာရီ): 50000 IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP65 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - CCC, CE, RoHS ဇာစ်မြစ် - ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: REIDZ ထုတ်ပေးသောအရောင်: RGB လျှောက်လွှာ - နိုက်ကလပ်၊ ကလပ်ဒစ္စကိုဒီဂျီဘားမီးအလင်းရောင်ရင်းမြစ် - LED ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ဒေါင်လိုက် 3d ဒေါင်လိုက် ပြွန် LED L ကို ...
ledwalker DMX 3d ဒေါင်လိုက်ပြွန်အလင်းအိမ်
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအမျိုးအစား: Matrix Light Input Voltage (V): DC12V, DC12V Lamp Power (W): 24, 24 Lamp Luminous Flux (lm): 1000 CRI (Ra>): 70 အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် (℃): -15 - 55 အလုပ်လုပ်သောတစ်သက်တာနာရီ - ၅၀၀၀၀၊ ၅၀၀၀ IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP65 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - CCC, CE, RoHS ဇာစ်မြစ် - ဂွမ်ဒေါင်း၊ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - Reidz မော်ဒယ်နံပါတ် - RZ-LXD - 64pcs ထုတ်ပေးသောအရောင်: RGB အလင်းရင်းမြစ် - LED အလျား - 0.5 m / 1m / 1.5m / 2m pixel: 16 Led Light So ...
၃၆၀ ဒီဂရီအလင်းရောင်ပြွန်စင်မြင့်မီးရောင် Multi-led pixel tube
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အသေးစိတ်အသေးစိတ်အာမခံချက် (နှစ်များ): ၂ သွင်းအားစု Volt (V): AC100-240V Lamp Lamp Luminous Efficiency (lm / w): 120 CRI (Ra>): 95 အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် (℃): -15 - 55 အလုပ်လုပ်သောတစ်သက်တာ (နာရီ) : 50000 Lamp Body Body: ABS IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP65 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - ce၊ RoHS ဇာစ်မြစ် - ဂွမ်ဒေါင်း၊ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - reidz ပုံစံနံပါတ် - T5 လျှောက်လွှာ - အဆင့်အလင်းရင်းမြစ် - LED အရောင်အပူချိန် (CCT): rgb LED အလင်းရင်းမြစ် - SMD မီးအိမ် Luminous Flux ...
RGB ထုတ်လွှတ်သောအရောင်နှင့် IP65 IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် DMX 3d ဒေါင်လိုက်ပြွန်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအမျိုးအစား - LED Matrix အလင်းသွင်းမှုဗို့အား (V): DC12V မီးခွက်ပါဝါ (W): ၂၄ မီးလုံးအလင်းရောင်စီးဆင်းမှု (lm): 1200 CRI (Ra>): ၇၀ အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် (℃): -20 - 50 အလုပ်လုပ်သောတစ်သက်တာ ( နာရီ): 50000 IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP65 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - CCC, CE, RoHS ဇာစ်မြစ် - ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: REIDZ ထုတ်ပေးသောအရောင်: RGB လျှောက်လွှာ - ညဥ့်ကလပ်အလင်းရင်းမြစ် - LED LED မီးရင်းမြစ် - SMD5050 မီးအိမ် Luminous Efficiency (lm / w) : ၅၀ အရောင်ပြ ...
DC 12V ဗို့အားနှင့်ပွဲတော်အားလပ်ရက်နာမည်မျက်နှာကျက်အလှဆင် dmx 3D tube
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအမျိုးအစား - LED Matrix အလင်းသွင်းမှုဗို့အား (V): DC12V မီးခွက်ပါဝါ (W): ၂၄ မီးလုံးအလင်းရောင်စီးဆင်းမှု (lm): 1200 CRI (Ra>): ၇၀ အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် (℃): -20 - 50 အလုပ်လုပ်သောတစ်သက်တာ ( နာရီ): 50000 IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP65 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - CCC, CE, RoHS ဇာစ်မြစ် - ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: REIDZ ထုတ်ပေးသောအရောင်: RGB လျှောက်လွှာ - ညဥ့်ကလပ်အလင်းရင်းမြစ် - LED အမည်: ဒေါင်လိုက်ပြွန် dmx LED အလင်းရင်းမြစ် - SMD5050 ဗို့အား: DC12V P ...
Nightclub ဇာတ်စင် 0.5m 1m DMX RGB LED 3D ဒေါင်လိုက်ပြွန်အလင်းအိမ်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအမျိုးအစား - LED Matrix အလင်းသွင်းမှုဗို့အား (V): DC12V မီးခွက်ပါဝါ (W): ၂၄ မီးလုံးအလင်းရောင်စီးဆင်းမှု (lm): 1200 CRI (Ra>): ၇၀ အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် (℃): -20 - 50 အလုပ်လုပ်သောတစ်သက်တာ ( နာရီ): 50000 IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP65 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - CE, RoHS ဇာစ်မြစ် - ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: REIDZ မော်ဒယ်နံပါတ် - RZ-LXD - 96PCS ထုတ်လွှတ်သောအရောင် - RGB အလင်းရင်းမြစ် - LED ထိန်းချုပ်မှုမုဒ်: DMX512 LED အလင်းရင်းမြစ် - SMD5050 ဆီမီးခွက် Luminous ထိရောက်မှု ...
dmx စင်တာတွင် 3D tube အလင်းကို ဦး ဆောင်သည်
ဒစ္စကိုမီးလုံးဈေးနှုန်း 3d dmx သည်ဒေါင်လိုက်ပြွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော night club decor
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအမျိုးအစား: Matrix Light Input Voltage (V): DC12V, DC12V Lamp Power (W): 24, 24 Lamp Luminous Flux (lm): 1000 CRI (Ra>): 70 အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် (℃): -15 - 55 အလုပ်လုပ်သောတစ်သက်တာနာရီ - ၅၀၀၀၀၊ ၅၀၀၀ IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP65 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - CCC, CE, RoHS ဇာစ်မြစ် - ဂွမ်ဒေါင်း၊ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - Reidz ထုတ်ပေးသောအရောင်: RGB လျှောက်လွှာ - ညအမှောင်အလင်းရင်းမြစ် - LED အလျား - 0.5 m / 1m / 1.5 m / 2m pixel: 16 Led Light Source: RGB ...
dmx 3d သည်ဥက္ကာပျံအလင်းကို ဦး ဆောင်သည်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အာမခံချက် (နှစ်များ): ၂ သွင်းအားစု Volt (V): DC12V Lamp Luminous Efficiency (lm / w): 30 CRI (Ra>): 70 အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် (℃): -20 - 50 အလုပ်လုပ်သောတစ်သက်တာ (နာရီ): 50000 ဆီမီးခွက်ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း: PVC IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP65 အသိအမှတ်ပြုချက် - CCC၊ ce၊ RoHS ဇာစ်မြစ် - ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: REIDZ မော်ဒယ်နံပါတ် - RZ-LXD-500 လျှောက်လွှာ: ညဥ့်ကလပ်၊ ညအမှောင်အလင်းရင်းမြစ် - LED ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Tube Lights Length : 0.5m / 1m / 1.5m / 2m ...
Nightclub lighting 3D Led meteor tube သည် disco light ဖြစ်သည်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအမျိုးအစား - LED Matrix အလင်းသွင်းမှုဗို့အား (V): DC12V မီးခွက်ပါဝါ (W): ၂၄ မီးလုံးအလင်းရောင်စီးဆင်းမှု (lm): 1200 CRI (Ra>): ၇၀ အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် (℃): -20 - 50 အလုပ်လုပ်သောတစ်သက်တာ ( နာရီ): 50000 IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP65 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - CE, RoHS ဇာစ်မြစ် - ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: REIDZ ထုတ်ပေးသောအရောင်: RGB လျှောက်လွှာ - ညဥ့်ကလပ်အလင်းရင်းမြစ် - LED LED အလင်းရင်းမြစ် - SMD5050 မီးအိမ် Luminous Efficiency (lm / w): 50 အရောင်အပူချိန် ...
RGB ဒေါင်လိုက်ပြွန်သည်ဥက္ကာအလင်း 3D ပြွန်ဗီဒီယိုကို LED
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အသေးစိတ်အသေးစိတ်အာမခံချက် (နှစ်များ): ၂ သွင်းအားစု Volt (V): AC100-240V Lamp Lamp Luminous Efficiency (lm / w): 120 CRI (Ra>): 95 အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် (℃): -15 - 55 အလုပ်လုပ်သောတစ်သက်တာ (နာရီ) : 500000 ဆီမီးခွက်ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း: ABS IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP65 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - ce မူရင်းဌာန - ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: reidz မော်ဒယ်နံပါတ် - T8 လျှောက်လွှာ - အဆင့်အလင်းရင်းမြစ် - LED အရောင်အပူချိန် (CCT): rgb LED အလင်းရင်းမြစ် - SMD Lamp Luminous စီး (lm): ...
LED point light ဆိုတာဘာလဲ?
LED wa ၏နည်းပညာနိယာမကဘာလဲ ...
LED point ligh ၏ကောင်းကျိုးများ ...
လိပ္စာ: B အဆောက်အ ဦး၊ Chuangjian စက်မှုဇုန်၊ Shiyan၊ Bao'an, Shenzhen China